Mootummaan Sa’uudii sirna Hajjii bara kanaa irratti hirmaachuuf haal dureewwan barbaachisaan ifoomse - NuuralHudaa
Mootummaan Sa’uudii sirna Hajjii bara kanaa irratti hirmaachuuf haal dureewwan barbaachisaan ifoomse
Mootummaan Sa’uudii tatamsaa’a dhibee Koroonaa Vaayirasii to’aachuuf jecha, ulaagaalee lammileen biyyattii fi kutaalee Addunyaa garagaraa irraa sirna Hajjii bara kanaa irratti hirmaachuuf fedhii qaban dirqama guutuu qaban jedhe ifoomse.
Miidiyaaleen biyyatii ministeera fayyaa Sa’uudii wabeeffachuun, Lammileen biyyattii sirna Hajjii baranaa irratti hirmaachuuf, baatii Zulhijjaa dura Talaallii COVID-19 kan mootummaa biyyatii irraa beekkamtii argate fudhaachuu akka qaban gabaafame.
Lammileen kutaa Addunyaa garagaraa irraa hirmaachuuf fedhii qaban immoo Talaallii COVID-19 kan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa irraa beekkamtii argate dirqama akka fudhattuu qaban Gaazeexxaan Ajil jedhamu gabaase.
Akkasumas Dooziin talaallii fudhatamuu qabuu qajeelfama Dhaabbanni Fayyaa addunyaa (WHO) ka’e irratti kan hundaa’e fi Talaallii marsaa lammaffaa gara Sa’uudii seenuu torban tokko dura akka fudhattuu qaban beeksise.
Dabalataanis hujjaajonni gara Sa’uudii imaluu dura waraqaa ragaa sa’aa 72’n dabre keessatti qorannoo COVID-19 irraa qulqulluu ta’u mul’isu qabachuu akka qaban ibsame.
Guutuu Addunyaa irraa waggaa waggaan muslimoonni miliyoona lama ol sirna Hajjii raawwatuuf gara Sa’uudii imaluun ni beekama, haa ta’u malee waggaa dabre Sa’uudiin sababa weerara COVID-19 balbala cufachuun, namoota biyyattii keessatti argaman 1000 qofaaf hayyamuun ni yaadatama.
SABAHNUR TEMAM HUSEN says:
utubaan islaamummaa meeqa
ulaagaan laa illallaah
Ya warra Nuur Al Hudaa qophiin keessan hedduu namatti toltii Obbaleessa keenya (hangafa keenya) hizaam Ibrahim baayyee yaannee!!!
Nuradine MahamadNur says:
NAIM gubbul says:
Abubakir Naim says:
mudassir maamu sheka says:
mashaa ALLAAH galata keessan rabbin jannatul firdowsiin haataasisu
heddu galatooma wan huda tokkorra jirtu akkanumatti itti fufaa
Najiib Abdallaa says:
Toofiqe Bayaan says:
09 25 835947
Caayaa TUBE says:
August 3, 2021 sa;aa 11:09 pm Update tahe